Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 8, 2020 12: 00 No Comments
Waalidkeed waxay ahaayeen macallimiin, ilaa caruurnimadoodii, Davis-yari aad ayuu ugu dhex bartay deegaanka shuuciyadda, wuxuuna durba helaa saamaynta waxa noqon doonta fikradeeda siyaasadeed, iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Reer Galbeedka: waxaan xadinaa 100% Kheyraadkooda waxaanan siinaa 1% Faa'iidooyinka waxaanan ugu yeernaa Gargaar shisheeye "Qiimaha madow / Afrikaanka jahliga marka loo eego qiimaha iftiinka madow / Afrika"
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 6, 2020 9: 09 No Comments
Dunida oo dhan, waxaan si joogta ah uga wada hadalnaa qiimaha jaahilnimada dadka madow / Afrikaanka iyada oo aan la soo qaadin qiimaha ay dhici doonto marka aan dhiirrigelinno iftiinka ...	Akhri wax dheeraad ah
Reer-galbeedka: waxaan bilownay Afrika qarniyaal iyo nus qarni ka dibna waxaan bililiqayney agabkeedii cayriin; ka dib, waxaan nidhi, iyagu (dadka Madow / Afrikaanka) ma jiraan wax faaiido ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 6, 2020 6: 12 No Comments
Magaca diinta, waxaan ku burburinay dhaqankooda hada, maadaama ay tahay inaan wax ku qabno si qurux badan, waxaan ku qiimeyneynaa maskaxdooda caawimaada deeqaha waxbarasho. Kadib waxaan aragnaa q ...	Akhri wax dheeraad ah
Madowga / Afrikaanka waxay la kulmaan talisnimo cad: Cadaawayaashu way yaqaanaan runta in dadka Madowga / Afrikaanka ah ay iska indhatiraan “Reer-galbeedku hurdo iyo hurdo midna ma leh; si kastaba ha noqotee, iyagu hubka ma dhigayaan, waxay durba diyaarinayaan jiil sii hayn doona awoodda cad ee ku aaddan farcanka Madow / Afrikaanka ”
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 6, 2020 3: 03 No Comments
Isla waqtigaana, muxuu madow / Afrikaanka sameeyaa? Haddii Whites ay u abuureen Walaalka Weyn ee Cadaanka mustaqbalkooda, muxuu u diidi karaa dadka Madowga / Afrikaanka ah? Madowga ...	Akhri wax dheeraad ah
Gacaliye Blacks / Afrikaan, waa inaan sidoo kale aqoonsanaa sumcadda baadiyeyaashayada: waxay yaqaanaan sida hoosta looga xarriiqo damiirkayaga iyagoo naga dhaadhicinaya in jannadeenna aysan ahayn farxadda ay bixiyaan hodanka afrikaanka, laakiin ay tahay sharaf mala-awaal ah dhimashada ka dib.
Haweeneyda Donald Trump Jr. ayaa isbitaal la dhigey kadib markii la furay baqshad ay ku jirto budo shaki leh
Wiil yar oo reer Senegal ah ayaa u aqoonsaday ciyaartoyda Barcelona iyaga oo taabanaya iyaga ... (VIDEO)
Feb24 01: 30